Big City Small World (Series2Episode5- Good Journalism?) - Myanmar Network
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 15:29 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode5- Good Journalism? (အတွဲ (၂)၊ အပိုင်း (၅) – ကောင်းသော သတင်းစာပညာလား?)
Series2Episode5- Good Journalism? ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Bindyu has done something to save the cafe but is it the right thing to do?
Bindyu သည် ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်တင်ရန် တစ်စုံတစ်ခုလုပ်လိုက်သည်။ သို့သော် ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်ပါ၏လား?
ဒေသခံဆိုင်တွေကို ကယ်တင်မဲ့ လှုပ်ရှားမှု?
ဟုတ်တယ်။ သူတို့က ကျွန်မရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဒေသခံ သတင်းစာတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြကြတယ်...
သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများသည် တိုးတက်မှုအသစ်များ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရသည်။
အခုမှပဲ သတင်းစာဆရာ အစစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ခံစားမိတော့တယ်!
အိမ်အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းအကြောင်း ရေးရတာနဲ့ တော့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှာပေါ့…
ဓါတ်ပုံလည်းကောင်းတယ် – ကြည့် ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ အရှေ့က ငါ့ရဲ့ နဖူးစည်းစာတမ်းလည်းတွေ့ရတယ်
ဖြိုဖျက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံနေရသော Tony ကော်ဖီဆိုင်နှင့် ဖိနပ်ဆိုင်တို့သည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် သမိုင်းဝင် အဆာက်အဦးများ ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေသိရှိထားပါသည်။ အင်း၊ ဒီအချက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာက အမှန်တော့ ကျွန်မနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလေ။ ရှင်မဟုတ်ဘူးလေ Bindyu...
ဟုတ်တယ်။ နင်မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာက သူတို့ ကော်ဖီဆိုင်ကို ပိတ်လိုပမရတော့ဘူးဆိုတာပဲ…!
နင်ပြောတာမှန်ပါတယ်လေ... တိုက်ခန်းအသစ်တွေကို ဆောက်လုပ်နေပြီး နေရာပိုရရန်အတွက် ဤသမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးများကို ဖြိုဖျက်ရန် မသ်င့တော်ကြောင်ိးကု ၎င်းတို့အနေဖြင့် သိရှိထားသည်ဟူသော သတင်းအချက်အလက်ကို သီးသန့်ရရှိထားပါသည... နေပါဦး။ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက သိပြီးသား! နင်ဘယ်လိုသိသွားတာလဲ?
အဲ့ဒါကတော့ သီးသန့်ပဲ! သတင်းဦးပေါ့!
ဒါပေမယ့် နင်ဘယ်လို အဲ့ဒီအချက်ကို ရှာတွေ့သွားတာလဲ?
သတင်းစာဆရာကောင်းတစ်ယောက်က ဘယ်တော့မှ သူရဲ့ သတင်းဇစ်မြစ်ကို ဖော်ပြလေ့မရှိဘူး!
Magda က ငါ့ကိုပြောတာ!
Magda ငါတောင်းပန်ပါတယ်... အဲ့ဒါက အသုံးအနှုန်း သက်သက်ပါ...
တစ်ယောက်ယောက်အကြောင်းကိုပြေနေတုန်း အဲ့ဒီလူယောက်လာရင် အသက်ရှည်ဦးမယ်လို့ ပြေတတ်ကြတယ်...
အော်သိပြီ။ ကျွန်မအကြောင်းကရော ဘာဖြစ်လို့ပြေနေကြတာလဲ?)
နင်က Bindyu ကို အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးလိုက်တယ်လေ…
အင်းဟုတ်တယ်၊ အမှန်ပဲ – စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကို ကျွန်မရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါက ငါ့အလုပ် အသစ်လေ။ အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတာလေ သိတယ်မဟုတ်လား...
အင်း ဟုတ်တယ်။ အဲဒီလျှို့ဝှက်ထားတဲ့သတင်းကို ရှင်တွေ့လာလို့ ကျွန်မအံ့သြနေတာ!
ဒါပေမယ် နင်အဲ့ဒီအကြောင်းရေလိုက်မယ်လို့ မထင်ထားဘူး Bindyu ရေ!
စိတ်မပူပါနဲ့ – နင့်နာမည်ကို ဘယ်နေရာမှာမှ ဖော်ပြမထားပါဘူး။ ဒါက မှန်ကန်တဲ့ သတင်းစာပညာလေ…
ဟုတ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နင်တို့ကို သတင်းအချက်အလက်ပေးလိုက်တယဆိုတာကို အလုပ်ရှင်တွေ သိသွားရင် ကျွန်မ ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ အလုပ်တောင် ပြုတ်ချင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်!
စိတ်မပူပါနဲ့ Magda ရယ်။ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး ပြီးတော့ ငါတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကလည်း အောင်မြင်မှာပါ...
ဟုတ်တယ် – စောင့်ကြည့်နေပါ – အခု သူတို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကော်ဖီဆိုင်ကို ပိတ်လို့မရတော့ဘူး!
အာ၊ သူက ဘယ်သူလဲ?
(ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ် ဟေ့လူ!
မင်းတို့အားလုံးကိုပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ! ငါပြန်လာပြီ!
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on January 26, 2013 at 11:01
Permalink Reply by khin myo swe on January 27, 2013 at 17:17
Permalink Reply by venus on September 18, 2013 at 8:51
Thanks you so much, sir!